Chineke Ò Nwere Aha? | Ajụjụ Gbasara Baịbụl
GỤỌ NKE Abkhaz Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kikamba Kikongo Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mongolian Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Onye ọ bụla nwere aha. Chineke n’onwe ya kwesịkwara inwe aha. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na mmadụ bụrụ enyi, ị ga-ama aha ya, na-akpọkwa ya aha ya. Í cheghị na anyị kwesịrị ịma aha Chineke ma na-akpọ ya aha ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị na ya bụrụ enyi?
Na Baịbụl, Chineke sịrị: “ Abụ m Jehova. Ọ bụ ya bụ aha m. ” (Aịzaya 42:8) Ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ aha ndị mmadụ na-etu Chineke, dị ka “ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, ” “ Ọkaakaa Onyenwe anyị ” na “ Onye Okike, ” Chineke chọrọ ka ndị na-efe ya na-akpọ ya aha ya. Ihe a o mere gosiri na ọ na-akwanyere anyị ùgwù.—Jenesis 17:1; Ọrụ Ndịozi 4:24; 1 Pita 4:19.
N’ọtụtụ Baịbụl, e dere ezigbo aha Chineke n’Ọpụpụ 6:3. Ebe ahụ sịrị: “ M na-apụta n’ihu Ebreham, Aịzik na Jekọb dị ka Chineke bụ́ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, ma emeghị m ka ha mara m n’aha m bụ́ Jehova. ”
Kemgbe ụwa, e dewe aha Chineke n’asụsụ Igbo, a na-ede ya Jehova. Ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ ndị na-ede ya “Yahweh,” ma nke a kacha ede bụ “Jehova.” Mgbe mbụ e dere Baịbụl, ọ bụghị asụsụ Igbo ka e ji dee Agba Ọhụrụ kama ọ bụ asụsụ Hibru. E dee asụsụ Hibru n’akwụkwọ, a na-esi n’aka nri agụ ya aga n’aka ekpe. Lekwa otú e si ede aha Chineke n’asụsụ Hibru, יהוה. A sụpee ya ná mkpụrụ akwụkwọ Igbo, ọ pụtara YHWH. N’asụsụ Bekee, a na-akpọ mkpụrụ akwụkwọ anọ a Tetragrammaton.
Gịnị ka a chọpụtara n’Akwụkwọ Nsọ ndị kacha mee ochie?